Ilaphu lebhatyi yasentwasahlobo
Ukhetho olufanelekileyo lokuqokelelwa kwebhatyi yakho yasentwasahlobo-ukukhanya, imibala enemibala ye-nylon. Iya kukwenza ugqame kwisihlwele.
Zininzi iintlobo zamalaphu ezempahla zangaphandle. Yeyiphi eyona ilungele wena? Kukhetho lwamalaphu angaphandle, kukho imisebenzi emithandathu ebalulekileyo. Makhe sijonge ezi zinto zintandathu: Ukungena komoya inqanaba lomoya ...
Siphumelele ngomgangatho kunye nomgangatho kwaye siphumelele ukwamkelwa kweshishini. Kwishishini lokuthumela ngaphandle, kufuneka silawule umgangatho ngokungqongqo. Ndiyathemba ukuzisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu kubasebenzisi kwihlabathi liphela. Ulawulo lomgangatho / inkxaso yezobugcisa ...
Khetha ingqokelela yakho yokuwa yowama-2020
Ukuwa sele kuza, kuya kufuneka ucwangcise ukuwa kwempahla yakho yangaphandle. Kukho uluhlu olubanzi ekufuneka uluthathile: iziseko zesiseko, i-jumpers, idyasi yemvula, izithambisi zomoya, iibhatyi zoboya njl. Ukukhetha umaleko wesiseko, kuya kufuneka ukhethe ilaphu lokusebenza ...
Umzekelo wokwenza i-OEM / i-ODM ukubanakho: Sinokuvelisa iimpahla ezizodwa kuyilo lwakho / iisampulu okanye kumzobo okanye umbono ovela kuwe. Abasebenzi bethu abanemodeli yokwenza amava baya kukubonelela ngezisombululo. Abasebenzi bethu abanezakhono kunye neqela QC wi ...
I-QC / Inkxaso yezobuchwephesha: Iqela lethu le-QC liqhuba ujongano olungqongqo kunye novavanyo olusuka kwinto eluhlaza ukuya kwiimveliso ezininzi. -Ilaphu liya ku-odolwa ngokweemfuno zabathengi, ezinje ngobunzima belaphu, ukwakheka, ikhowudi yemibala, ukukhawuleza kombala, njl njl.
Iprofayile yoRhwebo Sizinikela ekunikezeleni ngenkonzo ebanzi kunye neemveliso ezisemgangathweni ophezulu. Sisekwe kulwaneliseko lomthengi kunye neemfuno zentengiso. Inkcubeko yethu yeshishini igxile: kumgangatho, inkonzo kunye nokunyaniseka. Asithengisi imveliso yethu kuphela ...
Sikhonza iiklabhu zemidlalo, imibutho, iikholeji, iivenkile, amaziko okuthenga, umbutho karhulumente, umbutho kunye nabantu njl